Manje bheka embusweni Wami, lapho engiyiNkosi khona, lapho ngibusa khona. Kusukela ekudalweni kuze kube manje, amadodana Ami, ayeholwa Yimi, adlule ebunzimeni obuningi empilweni, ukungabibikho kobulungiswa emhlabeni, ukuya phansi naphezulu okusemhlabeni, kodwa manje sebehlala ekukhanyeni Kwami. Ubani ongakhali ngenxa yokungabibikho kobulungiswa emhlabeni esikhathini esedlule? Ubani ongakhali ngobunzima bokufika kunamuhla? Futhi ngabe abekho abangelithathe leli thuba lokuzinikela Kimi? Bakhona yini abangalithathi leli thuba ukuveza intshisekelo ekhulayo ezinhliziyweni zabo? Bakhona yini, ngalesi sikhathi, abangenamazwi ngabadlule kukho? Ngalesi sikhathi, bonke abantu baletha konke okuhle kakhulu okwabo Kimi ukuze ngikungcwelise. Bangaki abahlushwa ukuzisola ngobuwula bokungabi nalwazi esikhathini esedlule, bangaki abazizondayo ngenxa yezinto abebezifuna ngesikhathi esedlule! Bonke abantu sebefinyelele ekuzazini, bonke sebeyibonile imisebenzi kaSathane nobuhle Bami, manje ezinhliziyweni zabo senginendawo Nami. Angeke ngisahlangana nenzondo noma ukungafunwa ngabantu, ngoba umsebenzi wami omkhulu usufeziwe, futhi awusaphazamiseki. Namuhla, phakathi kwamadodana ombuso Wami, bakhona abangakazicabangeli? Ngabe bakhona abangakhathazeki ngokwengeziwe ngenxa yezindlela okwenziwa ngazo umsebenzi Wami? Bakhona yini abazinikele ngeqiniso ngenxa Yami? Ngabe sekunciphile ukungcola ezinhliziyweni zenu? Noma kwenyukile? Uma ukungcola ezinhliziyweni zenu kunganciphanga noma kungenyukanga, abantu abanjengani nakanjani ngizobalahla kude. Engikufunayo abantu abangcwele abahambisana nenhliziyo Yami, hhayi imimoya engcolile engihlubukayo. Yize noma engikufuna kubantu kungekho phezulu, umhlaba wangaphakathi wezinhliziyo zabantu uphithene ngendlela yokuthi abantu angeke balungele ukulandela intando Yami noma basheshe banelise izifiso Zami. Iningi labantu lisebenza emfihlakalweni ngethemba lokuthi bazokwazi ukuthola imiqhele yabo ekugcineni. Abantu abaningi bazama ngakho konke abanakho, bengacabangi ngisho nokuyeka kancane, besaba ngokujulile ukuthunjwa nguSathane okwesibili. Abacabangi ukuphinde bakholelwe ekufakeni izikhalazo Ngami, kodwa balokhu beqhubeka nokukhombisa ukwethembeka kwabo Kimi. Ngiwezwile amazwi akhulunywa esuka ezinhliziyweni ngabantu abaningi, izinto ezishiwo abaningi mayelana nezinto ezibuhlungu abadlule kuzo phakathi kwezinhlupheko; ngibone abaningi, engcindezelweni, bengehluleki ukwethembeka Kimi, ngibuke nabaningi, behamba ezindleleni ezimbi, beshikashikeka ukuthola indlela ephumayo. Kulezi zimo azange bakhalaze; ngisho noma bengakwazi ukuthola ukukhanya, bathi ukuphatheka kabi, kodwa azange nakanye bakhalaze. Kodwa ngizwe abantu abaningi bekhipha iziqalekiso ekujuleni kwezinhliziyo zabo, beqalekisa iZulu besola nomhlaba, futhi ngibabonile abantu abaningi bezilahlela ekuphelelweni yithemba ezinhluphekweni zabo, bezilahla sengathi balahla udoti emgqonyeni, ukuze umbozwe ukungcola nezisihla. Ngizwe abantu abaningi bexabana, ngoba ukuguquka kwesikhundla, okuholela ekuguqukeni kokubukeka ebusweni babo, ngalokho okuguqula ubudlelwane babo nabanye abantu, kwenze abangani bayeke ukuba abangani babe yizitha, behlaselana ngemilomo yabo. Iningi labantu lisebenzisa amagama Ami njengezinhlamvu zesibhamu, bevulela umlilo kwabanye benganakile, uze umhlaba wabantu ugcwale umsindo yonke indawo oqeda ukuthula nokuzola. Ngenhlanhla, manje sekunamuhla; ngale kwalokho ubani owaziyo ukuthi bangaki abangabe babhubhile ngaphansi kokudubula kwalelo thala lezinhlamvu ezinonya zesibhamu.
Ngokulandela amazwi aphuma Kimi, nokuhambisana nezimo zabo bonke abantu, umbuso Wami, kancane kancane, uyehla uza emhlabeni. Umuntu akasenayo imicabango emkhathazayo, noma “anake” abanye abantu, noma “acabangele” abanye abantu. Ngalokho-ke, izingxabano zezimpikiswano azisekho emhlabeni, futhi, ukulandela amazwi akhulunywa Yimi, izinhlobo “zezikhali” zesimanje nazo zihoxisiwe. Umuntu uba noxolo nomunye, inhliziyo yomuntu iphinde ibe nomoya wokuzwana, akekho olinde ukuzivikela uma ehlaselwa omunye ngokufihlekileyo. Bonke abantu sebebuyele esimweni esijwayelekile sebeqale impilo entsha. Ukuhlala ezindaweni ezintsha, abantu abaningi babuka okubazungezile, bazizwe sengathi bangene emhlabeni omusha sha, ngenxa yalokhu abakwazi ukwamukela indawo asebekuyo ngokushesha noma bangene endleleni eqondile ngokushesha. Ngakho-ke kuwukuthi kumuntu “umoya uyavuma kodwa inyama ibuthaka” ngokwabantu. Yize noma ngingakaze, njengabantu, ngizwe ubunzima Mina ngokwami, ngikwazi konke okungamaphutha akhe. Ngiyazazi izidingo zomuntu, kanti nokuqonda kwami ubuthaka bakhe kuphelele. Ngenxa yalesi sizathu, angihlekisi ngomuntu ngamaphutha akhe; ngiyamuhola kuphela, ngokwemisebenzi yakhe engalungile, indlela efanele “yokufundisa”, engcono yokwenza bonke abantu bangene endlelenieqondile, ukuze abantu bezoyeka ukuba yizintandane ezizulayo babe abantwana abaziswayo abanekhaya. Noma kunjalo, ukwenza Kwami kulawulwa imigomo. Uma abantu bengafuni ukuthokozela injabulo ekimi, engingakwenza ukulandela lokhu abakufisayo ngibathumele emgodini ongenamkhawulo. Ngalesi sikhathi, akekho umuntu okumele abe nezikhalazo enhliziyweni, kodwa bonke kumele bakwazi ukubona ubulungiswa Bami ezinhlelweni engizenzile. Angibaphoqi abantu ukuthi bangithande, futhi angishayi muntu ngokungithanda. Kimi kunenkululeko nokukhululwa okuphelele. Yize ikusasa lomuntu lisezandleni Zami, ngimnikile umuntu intando yenkululeko, engalawulwa Yimi. Ngale ndlela, abantu angeke basungule izindlela zokungena enkingeni ngenxa yezimemezelo zokuphatha Kwami, kodwa kunalokho, bazoncika kubulungiswa Bami, bathola ukukhululeka. Ngakho-ke abantu abaningi, bakude nokubanjwa nokuvinjwa Yimi, bayahamba beyofuna ezabo izindlela zokukhululeka.
Selokhu abantu ngibaphatha ngesandla esikhululekile, angikaze ngibeke izinkinga ezingasombululeki, angikaze ngibeke muntu ebunzimeni; akunjalo? Yize noma iningi labantu lingangithandi, ngikude ukucasulwa yile ndlela yokuziphatha, nginike abantu inkululeko, ngibavumela ukuthi bazenzele ngendlela yabo kuze kufike ekutheni ngibayeke babhukude olwandle olumuncu. Ngoba umuntu uyisitsha esingenantengo: Yize ezibona izibusiso engiziphethe ezandleni Zami, kodwa akananhloso yokuzithokozela, uncamela ukubamba ameva esandleni sikaSathane, ngalokho aziyekele abe “ukudla” kukaSathane. Yebo, bakhona abakubonile ukukhanya Kwami ngamehlo abo, ngakho, yize noma bephila ezikhathini zamanje, abazange ngenxa yalezi zikhathi ezididayo balilahle ithemba ekukhanyeni, kodwa baqhubekile bafuna babheka phakathi kwakho konke lokho—yize endleleni kugcwele izithiyo. Uma umuntu engihlamuka, ngiphonsa ulaka Lwami kuye, ngalokho-ke umuntu uzobhubha ngenxa yokungalaleli kwakhe. Uma engihlonipha, ngihlala ngicashile kuye, ngale ndlela ngivusa uthando ekujuleni kwenhliziyo yakhe, uthando olungafuni ukungikhohlisa kodwa ukunginika injabulo. Ziningi izikhathi, lapho umuntu engifuna, engavale amehlo Ami ngathula, ukuze ngivuse ukholo lwakhe lweqiniso. Kodwa uma ngingakhulumi, ukholo lomuntu luyashintsha ngokushesha, engikubonayo “ubuhle” bamanga, ngoba abantu abakaze bangithande ngeqiniso. Kungesikhathi lapho ngiziveza khona lapho abantu bekhombisa “ukholo” olukhulu; kodwa uma ngicashile endaweni Yami efihlakele, baphelelwa yithemba izinhliziyo zibe phansi, sengathi basaba ukungona, noma ngenxa yokuthi abanye ababuboni ubuso Bami, “bangicubungule ngokujulile” okwenza baphikise iqiniso lobukhona Bami. Baningi kakhulu abantu abahlala kulesi simo; baningi abanalo mqondo. Kuyimvelo nje yabo bonke abantu ukufihla lokho okubi kubo. Ngenxa yalokhu, bayanqikaza ukubheka amaphutha, bese bevuma iqiniso lamazwi Ami kuphela beququda amazinyo futhi bezifihle ubuso.
17 Mashi, 1992
Okwedlule: Isahluko 17
Okulandelayo: Isahluko 19
UNkulunkulu ukhuluma amazwi Akhe enze nomsebenzi Wakhe ngokwezinkathi ezehlukene, nasezinkathini ezehlukene, ukhuluma amazwi ehlukene....